ကြွက်ရန် ကို နှိမ်နင်းဖို့ ဘာဖြစ် လို့ မြွေတွေ လွှတ်ရ တာလဲ? – Shwewiki.com
ကြွက်ရန် ကို နှိမ်နင်းဖို့ ဘာဖြစ် လို့ မြွေတွေ လွှတ်ရ တာလဲ?
January 22, 2020 By admin Knowledge
ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသိအမြင်တွေ နောက်ကျနေကြပါတယ်။ အသိအမြင်နောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အတန်းပညာတွေ အများကြီး တတ်တာ မတတ်တာကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိစ္စရပ်တခုကို မှန်လား မှားလားဆိုတာကို မိမိဦးနှောက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း တနည်းအားဖြင့် ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ကိစ္စတခု ပေါ်လာရင် အခြေခံကျကျ စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်စွမ်းနည်းပြီး ကိုယ့်စိတ်ထဲက ရုတ်တရက် ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ များပါတယ်။ အဲဒါအချက်တွေနဲ့ ဒီနေ့ခေတ် ဖေ့ဘုတ်နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ကလေးသူခိုး ကိစ္စ မှားယွင်းမှုတွေလို စိတ်မချမ်းသာစရာတွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲ။
အခုလည်း ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်မှာ ကြွက်တွေ ပေါလွန်းလို့ မြွေတွေ လွှတ်တဲ့အပေါ် ဟာသလိုလို လုပ်နေကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်နေကြတာဟာ အစာကွင်းဆက်ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို မသိကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသဘောတရားကလည်း ခက်ခက်ခဲခဲ မဟုတ်ပါဘူး။ မူလတန်းနဲ့ အလယ်တန်း သိပ္ပံသင်ခန်းစာတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရှေးလူကြီးတွေ အစဉ်အဆက် ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေမှာလည်း ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အသိအမြင်နဲ့ ဆင်ခြင် သုံးသပ်နိုင်စွမ်းတွေ လျော့နည်းပြီး ဘာဖြစ်ဖြစ် ဟာသ လုပ်ပစ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကြီးဟာလည်း ဟာသ နိုင်ငံကြီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ကျော်ဟိန်းရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ “ပန်းမြိုင်လယ်က ဥယျာဉ်မှူး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက ဘီအီးဒီအောင်သိုက်ပြောတဲ့ “ရေခပ်နောက်ကျတာထက် အတွေးအခေါ် နောက်ကျတာက ပိုဆိုးတယ်” ဆိုတဲ့ စကားထဲကလို အတွေးအခေါ် အသိအမြင်တွေ နောက်မကျမှသာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖယ်ခုံမြို့နယ်မှာ မြွေတွေ လွှတ်တဲ့အကြောင်းကို တတ်သိနားလည်တဲ့ ပညာရှင်တဦးရဲ့ ရေးသားမှုကို အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်-
“သစ်တောက လင်းမြွှေတွေလွှတ်တယ်ဆိုတာကို ရယ်စရာလို့ ထင်နေကြတယ်။ လယ်ထဲက ကြွက်နှိမ်နင်းဖို့ မြွေထက်ကောင်းတာ ဘာမှမရှိဘူး။ အဲဒီမြွေတွေကလဲ အဆိပ်ထုတ်ပီးသား မြွေတွေ။ အဆိပ်ရှိမြွေတွေက အဆိပ်ထုတ်ပီး မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်ဖို့ အင်းစိန်စက်ရုံကို ပို့ပါတယ်။ ဘာမှ ပြသနာမရှိပါဘူး။
ဒေသတခုမှာ ရေလွှမ်းမိုးမှု ကြုံရပီဆို အဲဒေသက မြွေတွင်းတွေ ရေဝင်ပီး မြွေတွေ သေကုန်တယ်။ အဲလိုအချိန်ဆို ကြွက်တွေ သောင်းကျန်းပီပဲ။ မြွေမရှိရင် ကြွက်ကို သတ်မယ့်သူမရှိ။ Food Chain ပျက်သွားတာပေါ့။ ကြွက်တွေက သီးနှံတွေကို ဖျက်ဆီးပါတယ်။ သတ်ရခက်လို့ ထိုင်ကြည့်နေရုံပဲ တတ်နိုင်ပါတယ်။
အနီးစပ်ဆုံး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက ပဲခူးတိုင်း ဒိုက်ဦးမှာ ရေလွှမ်းတော့ မြွေတွေ သေကုန်လို့ လယ်သမားတွေ အတော်ဒုက္ခရောက်တယ်။ ပဲခူးရိုးမပေါ်က ကြွက်အုပ်ကြီးတွေ ဆင်းလာပီး လယ်ဧကအတော်များများကို ဖျက်ဆီးသွားလို့ အစိုးရကပါ Team တခု လွှတ်ပီး ကြွက်ရှင်းလင်းရေး အကြီးအကျယ်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ တချို့လယ်တွေဆို ကြွက်များလွန်းလို့ မီးပါရှို့ပစ်လိုက်ရတယ်။ သီးနှံတွေရယ် မြွေရယ် ကြွက်ရယ်ဆိုတာက သဘာဝအတိုင်း တည်ရှိနေတဲ့ ဂေဟစနစ်ပါပဲ။ ဒါကို ဖျက်ဆီးလို့ မရပါဘူး။ ပိုးသတ်ဆေးထက် ဒီနည်းက အန္တရာယ်ကင်းပီး အကျိုးရှိစေပါတယ်။ စာမတတ် ပေမတတ် မီဒီယာတွေကြောင့် အများညီ ဤကို ကျွဲမဖတ်ကြစေဖို့ပါ။”
ကြှနျတျော တို့ မွနျမာနိုငျငံသားတှရေဲ့ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးဟာ အသိအမွငျတှေ နောကျကနြကွေပါတယျ။ အသိအမွငျနောကျကတြယျဆိုတဲ့ နရောမှာ အတနျးပညာတှေ အမြားကွီး တတျတာ မတတျတာကို ပွောတာ မဟုတျဘူး။ ကိစ်စရပျတခုကို မှနျလား မှားလားဆိုတာကို မိမိဦးနှောကျနဲ့ ဆုံးဖွတျနိုငျစှမျး တနညျးအားဖွငျ့ ဆငျခွငျသုံးသပျနိုငျစှမျး လြော့နညျးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ကိစ်စတခု ပျေါလာရငျ အခွခေံကကြ စဉျးစားသုံးသပျနိုငျစှမျးနညျးပွီး ကိုယျ့စိတျထဲက ရုတျတရကျ ပျေါလာတဲ့အတိုငျးပဲ ဆုံးဖွတျလိုကျတာ မြားပါတယျ။ အဲဒါအခကျြတှနေဲ့ ဒီနခေ့တျေ ဖဘေု့တျနဲ့ ပေါငျးစပျလိုကျတဲ့ အခါမှာ ကလေးသူခိုး ကိစ်စ မှားယှငျးမှုတှလေို စိတျမခမျြးသာစရာတှေ ဖွဈကုနျတော့တာပါပဲ။
အခုလညျး ရှမျးပွညျနယျ၊ ဖယျခုံမွို့နယျမှာ ကွှကျတှေ ပေါလှနျးလို့ မွှတှေေ လှတျတဲ့အပျေါ ဟာသလိုလို လုပျနကွေပါတယျ။ ဒီလိုလုပျနကွေတာဟာ အစာကှငျးဆကျဆိုတဲ့ သဘောတရားကို မသိကွလို့ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီသဘောတရားကလညျး ခကျခကျခဲခဲ မဟုတျပါဘူး။ မူလတနျးနဲ့ အလယျတနျး သိပ်ပံသငျခနျးစာတှမှော ပါဝငျခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ ရှေးလူကွီးတှေ အစဉျအဆကျ ပွောခဲ့တဲ့ စကားတှမှောလညျး ပါဝငျပွီး ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလို အသိအမွငျနဲ့ ဆငျခွငျ သုံးသပျနိုငျစှမျးတှေ လြော့နညျးပွီး ဘာဖွဈဖွဈ ဟာသ လုပျပဈမယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံကွီးဟာလညျး ဟာသ နိုငျငံကွီး ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
ရုပျရှငျမငျးသားကွီး ကြျောဟိနျးရဲ့ အောငျမွငျကြျောကွားခဲ့တဲ့ “ပနျးမွိုငျလယျက ဥယြာဉျမှူး” ရုပျရှငျဇာတျကားထဲက ဘီအီးဒီအောငျသိုကျပွောတဲ့ “ရခေပျနောကျကတြာထကျ အတှေးအချေါ နောကျကတြာက ပိုဆိုးတယျ” ဆိုတဲ့ စကားထဲကလို အတှေးအချေါ အသိအမွငျတှေ နောကျမကမြှသာ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံကွီး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဖယျခုံမွို့နယျမှာ မွှတှေေ လှတျတဲ့အကွောငျးကို တတျသိနားလညျတဲ့ ပညာရှငျတဦးရဲ့ ရေးသားမှုကို အောကျမှာ ဖျောပွလိုကျပါတယျ-
“သဈတောက လငျးမွှတှေလှေတျတယျဆိုတာကို ရယျစရာလို့ ထငျနကွေတယျ။ လယျထဲက ကွှကျနှိမျနငျးဖို့ မွှထေကျကောငျးတာ ဘာမှမရှိဘူး။ အဲဒီမွှတှေကေလဲ အဆိပျထုတျပီးသား မွှတှေေ။ အဆိပျရှိမွှတှေကေ အဆိပျထုတျပီး မွှဆေိပျဖွဆေေးထုတျဖို့ အငျးစိနျစကျရုံကို ပို့ပါတယျ။ ဘာမှ ပွသနာမရှိပါဘူး။
ဒသေတခုမှာ ရလှေမျးမိုးမှု ကွုံရပီဆို အဲဒသေက မွှတှေငျးတှေ ရဝေငျပီး မွှတှေေ သကေုနျတယျ။ အဲလိုအခြိနျဆို ကွှကျတှေ သောငျးကနျြးပီပဲ။ မွှမေရှိရငျ ကွှကျကို သတျမယျ့သူမရှိ။ Food Chain ပကျြသှားတာပေါ့။ ကွှကျတှကေ သီးနှံတှကေို ဖကျြဆီးပါတယျ။ သတျရခကျလို့ ထိုငျကွညျ့နရေုံပဲ တတျနိုငျပါတယျ။
အနီးစပျဆုံး လှနျခဲ့တဲ့နှဈတှကေ ပဲခူးတိုငျး ဒိုကျဦးမှာ ရလှေမျးတော့ မွှတှေေ သကေုနျလို့ လယျသမားတှေ အတျောဒုက်ခရောကျတယျ။ ပဲခူးရိုးမပျေါက ကွှကျအုပျကွီးတှေ ဆငျးလာပီး လယျဧကအတျောမြားမြားကို ဖကျြဆီးသှားလို့ အစိုးရကပါ Team တခု လှတျပီး ကွှကျရှငျးလငျးရေး အကွီးအကယျြလုပျခဲ့ရတယျ။ တခြို့လယျတှဆေို ကွှကျမြားလှနျးလို့ မီးပါရှို့ပဈလိုကျရတယျ။ သီးနှံတှရေယျ မွှရေယျ ကွှကျရယျဆိုတာက သဘာဝအတိုငျး တညျရှိနတေဲ့ ဂဟေစနဈပါပဲ။ ဒါကို ဖကျြဆီးလို့ မရပါဘူး။ ပိုးသတျဆေးထကျ ဒီနညျးက အန်တရာယျကငျးပီး အကြိုးရှိစပေါတယျ။ စာမတတျ ပမေတတျ မီဒီယာတှကွေောငျ့ အမြားညီ ဤကို ကြှဲမဖတျကွစဖေို့ပါ။”
ပွင့်န ဒီမောင် က အေးမြဖြူကို သိစေချင်လို့ အမှန်တရားကိုထုတ်ပြောတာပါလို့ ဆို
နေ့စဉ်သောက်နေကျရေထဲ ကို သခွားသီးးလေး ပဲထည့်ပြီး သောက်ကြည့် ပါ…